रातो कोठीलाई वेवास्ता नगराैं ! | Nepal Newz
Home > नेपाली समाचारहरु > स्वास्थ्य > रातो कोठीलाई वेवास्ता नगराैं !
News January 7, 2017 स्वास्थ्य	0
पुस २३, २०७३- हामी सबैजसोको शरीरमा रातो कोठी हुन्छ । यो हेर्दा सामान्य लाग्छ । तर, त्यो कथंकदाचित् कोतरियो/चिमोटियो भने त्यसबाट उब्जिने समस्या भने बेवास्ता गर्नलायक हुन्न । चिकित्सकीय उपचार प्रक्रियामा नगई धर पाइन्न ।
यस्तै समस्यामा उमेश पनि परे । रातो कोठीबाट रगत निस्किन थाल्यो र उनले दु:ख पाउन थाले । चिकित्सकले रातो कोठी नै निकाल्ने सल्लाह दिए । उनले त्यसै गरे ।
‘रातो कोठीमा कुनै पनि परिवर्तन देखिए चनाखो हुनुपर्छ । रातो कोठीमा कुनै पनि किसिमको घाउ भए वा यो बढेको देखिए अथवा यसको स्वरूप परिवर्तन हुन लागे तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ ।’
हाम्रो समाजमा के मान्यता व्याप्त छ भने, पैसा बढी कमाउनेहरूको शरीरमा रातो कोठी निस्किने गर्छ । यो एकदमै गलत, अवैज्ञानिक मान्यता हो । रातो कोठी आफैं निको हुँदैन वा नहराए पनि सामान्यत: यसले कुनै समस्या उब्जाउँदैन ।
शरीरमा सुरुमा सामान्यत: रातो कोठी सपाट हुन्छ र पछि यो छालाको सतहभन्दा माथि उठेर आउँछ । अति सामान्य मानिएको रातो कोठी कोटयाउँदा, चिमोट्दा, दल्दा, काटिँदा रगत निस्केर समस्या हुन सक्छ । यतिसम्म कि, घाउ भइसकेको कोठीमा लुगा फाटोले घस्रेरसमेत समस्या हुने गरेको छ ।
रातो कोठी अर्थात् ‘चेरी एन्जियोमा’ रक्त नलीले बनेको छालाको गैरक्यान्सर कारक सामान्य वृद्घि हो । यसलाई ‘सेनाइल एन्जियोमास’, ‘क्याम्पवेल डी मोरगन स्पट’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
रातो कोठीभित्र टुटेको रक्तनलीले यसलाई रातो स्वरूप दिन्छ । यो चेरी फलजस्तै रातो हुने भएकोले यसलाई चिकित्सा भाषामा ‘चेरी एन्जियोमा’ भन्ने गरिएको हो । यो कोठी शरीरको सबैजसो भागमा हुने गर्छ ।
‘रातो कोठीमा कुनै पनि परिवर्तन देखिए चनाखो हुनुपर्छ,’ छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्ण सचेत गराउँछन्, ‘रातो कोठीमा कुनै पनि किसिमको घाउ भए वा यो बढेको देखिए अथवा यसको स्वरूप परिवर्तन हुन लागे तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ ।’
चिकित्सकले यो कोठीले नोक्सान गर्छ कि गर्दैन, क्यान्सर पो उत्पन्न गर्ने हो कि भन्ने पत्ता लगाउँछन् । यो सामान्यत: तीन दशक नाघेका वा पाको उमेरका व्यक्तिहरूमा बढी देखिन्छ । रातो कोठी हुने वास्तविक कारण हालसम्म थाहा नभए पनि केही खास व्यक्तिलाई नै यो हुनुमा वंशानुगत कारकसमेत हुन सक्ने डा. कर्ण बताउँछन् ।
विषालु ग्यास र रसायनहरूको सम्पर्कमा बढी रहने व्यक्तिहरूलाई यो समस्या बढी देखिएको पाइएको छ । विस्फोटक पदार्थमा उपयोग गरिने ब्रोमाइड लगायतका रसायन र ‘मस्टर्ड ग्यास’ को सम्पर्कमा आउनेहरूलाई बढी हुने गर्छ । सैनिकहरू, सेतो छाला भएकाहरूमा यो समस्या बढी पाइने गरेको डा. कर्ण सुनाउँछन् ।
यो शरीरमा ‘चेरी’ फलजस्तै चम्किलो रातो थोप्लोको रूपमा देखिन्छ । यसको आकार फरक फरक हुन्छ । यो कोठी सानो थोप्लोदेखि लिएर एक चौथाइ इन्च व्याससम्मको हुन सक्छ । छालामा बाहिरबाट टाँसिएजस्तो देखिन्छ ।
छाला रोग विशेषज्ञलाई रातो कोठी पहिचान गर्न खासै परीक्षण आवश्यक हुँदैन । उनीहरूले यसको वृद्घि, स्वरूप आदि हेरेरै यो चेरी एन्जियोमा रहेको खुट्टयाउन सक्छन् ।
सामान्यत: यसको पहिचानको लागि थप परीक्षण आवश्यक हुँदैन । तर कहिलेकाहीं चाहिँ रोगको पहिचान पक्का गर्न छालाको बायोप्सी गराउनुपर्ने हुन सक्छ ।
रातो कोठीमा सामान्यत: उपचार आवश्यक हुँदैन । तर यो रातो कोठीबाट रगत चुहिन थाले उपचार आवश्यक हुन्छ । यसले अनुहारलाई प्रभावित गरिरहेको छ भने सुन्दरताको दृष्टिकोणले यसको उपचार गर्न सकिन्छ ।
यसको उपचारअन्तर्गत विद्युतीय शल्यक्रिया (इलेक्ट्रोकटराइजेसन) बाट रातो कोठीलाई डढाउनेसमेत गरिन्छ । यसले पनि यो कोठी शरीरबाट हटेर निको हुन्छ ।
यस्तै, लेजर उपचार विधिबाट समेत यो कोठी हटाइन्छ । यसका लागि पल्स्ड डाई लेजर उपयोग गरिन्छ । यो लेजरले रातो कोठीलाई नष्ट पार्न पर्याप्त राप दिन्छ । यो प्रक्रिया गराउन अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्दैन ।
सामान्य रूपमा कोठीलाई छालाको माथिल्लो सतहबाट काटेरसमेत हटाउने गरिन्छ । यो कोठीलाई अत्यन्त निम्न तापक्रममा गरिने क्रायो थेरापीको माध्यमले समेत नष्ट गरिन्छ । यसअन्तर्गत तरल नाइट्रोजनलाई रातो कोठीमाथि करिब दस सेकेन्डका लागि छर्किइन्छ । अत्यधिक चिसोले कोठीलाई नष्ट गर्छ । यो प्रक्रियाअन्तर्गत भएको घाउलाई बढी स्याहारको आवश्यकतासमेत पर्दैन ।
अन्य विधिको दाँजोमा यसबाट संक्रमण हुने सम्भावनासमेत निकै कम हुने डा. कर्ण बताउँछन् ।